Abakhiqizi be-Plastic Cable Gland & abahlinzeki - China Plastic Cable Gland Factory
Izesekeli zeCable Gland
IKHWABULA LOKUQHUMEZA ukuqhuma
Ipulasitiki Ikhebula indlala
Metal Ikhebula indlala
Umsele we-Flexible Metallic
Metal komsele nokufaka
Plastic lukathayela tubing
Plastic Tubing nokufaka
Inayiloni Ikhebula Indlala (Intambo yeMetric / PG / NPT / G)
I-EMC Cable Gland (Intambo yeMetric / Pg)
EMC High-temp Metal Ikhebula indlala nge Core Single (Me ...
Inayiloni Ikhebula indlala
Izindlala zekhebula zisetshenziselwa ukubopha, ukulungisa, ukuvikela izintambo emanzini nasothulini. Zisetshenziswa kabanzi ezindaweni ezinjengamabhodi wokulawula, ama-apparatuses, amalambu, imishini yokusebenza, isitimela, izinjini, amaphrojekthi njll.
Ngentambo yekhebuli ye-nylon, singakunikeza okumpunga okumhlophe (RAL7035), okumpunga okukhanyayo (Pantone538), okumpunga okujulile (RA 7037), omnyama (RAL9005), okuluhlaza okwesibhakabhaka (RAL5012) nokunye okudingayo.
I-anti-fracture Nylon Cable Gland (Intambo yeMetric / Pg / G)
Izindlala zekhebula zisetshenziselwa ukubopha, ukulungisa, ukuvikela izintambo emanzini nasothulini. Zisetshenziswa kabanzi emikhakheni enjengamabhodi wokulawula, okokusebenza, amalambu, imishini yokusebenza, isitimela, izinjini, amaphrojekthi njll. Singakunikeza ngezindlala zekhebula ezimpunga ezimhlophe (RAL7035), mpunga okhanyayo (Pantone538), mpunga ojulile (RA 7037 ), omnyama (RAL9005), oluhlaza okwesibhakabhaka (RAL5012) neminye imibala njengoba udinga.
Izindlala zekhebula zisetshenziselwa ukubopha, ukulungisa, ukuvikela izintambo emanzini nasothulini. Zisetshenziswa kabanzi emikhakheni enjengamabhodi wokulawula, okokusebenza, amalambu, imishini yokusebenza, isitimela, izinjini, amaphrojekthi njll. Singakunikeza ngezindlala zekhebula ezimpunga ezimhlophe (RAL7035), mpunga okhanyayo (Pantone538), mpunga ojulile (RA 7037 ), omnyama (RAL9005), okuluhlaza okwesibhakabhaka (RAL5012) nezindlala zekhebula ezingafakwa ngemisebe yenuzi.
No.6 Hangming Road, Isifunda esisha sasePudong, eShanghai, eChina